Semalt: Kushandisa Izvo Email Marketing Kunobatsira Sei SEO Results?
6ES5581-0ED14 SIEMENS.5;color:#5f5f5f;text-align:justify;"> Nyanzvi dzeDzinza dzinowanzoshandisa maiyo ekutengeserana kwemashoko sezvinoita nzirasearch engine ranking ye webhusaiti yacho indirectly. Kana pakutanga kuona kuwirirana kwakaoma kuonekwa, kuitisa email kutengesamishandirapamwe inobatsira:
Kubudirira kudanidzira-ku-kuita nenzira dzakasiyana,
Kuunganidza pfungwa dzinokosha dzekambani kuburikidza nemashoko mubhuku re blog
Emails anogona kuita kambani kutonga chimiro chekuisa marimi kuburikidza nekugovana zvinyorwa.
Emails anogona kukwezva vanhu kuburikidza nedzimwe nzira dzekugarisana nevamwe.
Saka, SEO uye email hazvibatanidzi zvakananga. Tsvaga injiniusakwira kune urongwa hwevanhu vangave vari kutarisa pane imwe nguva. Zvisinei, kubata vateereri vako nekushingaira kuburikidza ne emaimeriiyo nzira yakaratidza kuti inokwanisa kutora hutsika hunoenda kune webhusaiti yako nenzira yakakosha. Inonzi Abgarian, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt inotsanangura kuti mitsva yekutsvaga mazai eEOO.
Kushanda pamwe chete kwevateereri
Zvinyorwa zvedhizha mune emaimeri akadai se keywords hainachero zvakakonzera kuIOO rankings. Zvisinei, kunyatsogadzirisa mishandirapamwe emajeri kunokwevera zvakanakisisa zvese zvinotsigira izwi rakanyanya iroinowedzera hutsva hwekutsvaga mukati mekutsvaga injini. Emails zvakare anokurudzira kupindura nekugovana. Nokuda kweizvi, iyo yakanakisisa blog post ichatigamuchira mhinduro pasi. Kugovana kuchazoitikawo kune iyo nzvimbo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzepaIndaneti dzakadai seshupfumi. Semagumo,nhamba yemaonero echinyorwa ichi chinowedzera kuwedzera kumashure kumashure anodiwa pakuvandudza seO ranking..Zvimwe zvekukoka-ku-kuita mabasarimwe rinogona kuita nerinyore ye email ingasanganisira:
Kumbirai vaverengi kuti vaudze pazasi kweblogi kuti sei nzvimbo yacho ichavabatsira,
kukurudzira vateereri kuti vataure chirongwa cherudo kuti vaparadzire chikonzero chakanaka uye,
Kuwedzerwa kwekutengesa kwehutachiwana kuburikidza nemitambo yemagariro evanhu sepa Twitter kana Facebook.
RSS feeds kana Regular Content Consumption
Kuita vateereri chengetedza kunamatira kune webhusaiti yako kunogona kuvanyore basa. Zvisinei, kuita kuti vateereri vakafanana vawane zvakanyanyisa kune zvaunenge uchiita zvinogona kunge zvakaoma. Iyi misiyano inoguma nokuti munhu anoda kuverakasiyana nedzimwe nzira uye zviri mukati. Vateereri vanoda kutarisa zvinyorwa uye vanozviverenga kunyange vasati vasvikakusvika kune imwe chete. Somuenzaniso, mumwe anogona:
Iva nechokwadi chokuti vanhu vanoziva kuti vanogona kuramba vachivandudzwa kuburikidza ne RSS feeds,
Ipa sarudzo yekubhadhara kuimeri mazita ezveruzivo pane zvimwe zvinhu uye,
Bvumira vanhu kuti vabhadhare kune zvigaro zvemasangano ehupfumi zvakadai sekunyoresa mavhidhiyo enyu eChina Channel
Nzira dzezvekugarisana nevamwe vehutano dzekuwana zviri mukati mako ndezvechinhu chikuru chinoita kuti vashanyi varambe vachisvika pakatarisana nemashoko ekublog.
Kudzokorora mabhuku ehurukuro
Dhiyabhorosi inounganidzwa kubva emaimeri inogona kudzokororwa sezviri mukatithe blog. Vanhu vanobatsirwa kuburikidza nekushandisa iyi nhau yepahutano inogadzirwa nekunyora kuti sei iyo inovabatsira sei. Somuenzaniso, Long newsletters anogona kuva blognzvimbo dzinogona kukwezva nzvimbo yekutaura mamwe mazwi. Mifananidzo shomanana inogona kukonzera mukana wekugoverana kuburikidza nehuwandu hwehupfumi hunowedzera SEO ranking.Izvi zvinobvumira vanhu vasina kubhadhara ku RSS yako verenga zvayo.
Kutarisa pane zvataurwa pamusoro apa, vatengi Semalt vakaratidza kuti emaimeri anogona kuvandudza SEO rankings. Nokubatanidza vateereri, kudzorerazve zvinyorwa zvemashoko, uye kusanganisira RSS feedsnotification automation, zvinogadziriswa neUnijini Engine Optimization zvaizobhadhara. Kune blogger chero ipi zvayo inoda kutora nzira yakanaka,kuumba mazita akanaka ema email ingadai yakakosha.